I Steatite Yokugaya Burr China Manufacturers & Suppliers & Factory
I Steatite Yokugaya Burr - umkhiqizi, ufektri, umhlinzeki waseChina
(Yonke imikhiqizo engu- 24 ye-I Steatite Yokugaya Burr)
I-99% i-alumina ceramic milling burr inezinkinga ezingavamile zokugqoka kunensimbi eyodwa. Ngenxa yendlela yokukhiqiza umjovo futhi ucindezele, ukusebenza kahle kokukhiqiza kuphakeme kunokwenziwa kwe-CNC ngensimbi yokugaya i-disc. Futhi kulula kakhulu ukuhlangana nomshini wekhofi. Siye sanikeza i-disk yokukhishwa...
Ukufaka isikhwama se-alumina cereamic I-Alumina yokubhekwa kwe-ceramic kakhulu esetshenziselwa ukushisa kagesi, i-electronica, imishini yokuqhuba umshini ngoba ikhanda layo eliphakeme, ukuqhutshwa okuphezulu okushisa, ukumelana nokushisa okuphezulu, izakhiwo zokulwa ne-chemistry. Kanti futhi isilwane se-alumina...
I Steatite Yokugaya Burr